Sida loo beddelo cabbirka farta ku qoran iPhone-kayga oo leh iOS 9 | Wararka IPhone
Haddii aan door bidno xarfaha adeegsadaha macruufka ee macruufka ah ama ka weyn, laga bilaabo iOS 7 waa suurtagal beddel farta qoraalka ee nidaamka guud ee iPhone, iPod ama iPad. Waa geedi socod aad u fudud, laakiin waa wax caadi ah inaadan ogayn inay suurtagal tahay haddii aadan waligaa u baahnayn ama aad aragto ikhtiyaarka. Si ka duwan markii aan qoraalka si geesinimo leh u dhigeyno, beddelka cabbirka xarfaha uma baahna nasasho, marka waxaan dib ugu laaban karnaa si aan u aragno isbeddellada isla markiiba. Waxaan sharxeynaa sida loo beddelo cabbirka xarfaha ka dib boodka.
1 Sida loo beddelo cabbirka farta ku qoran iPhone-kayga oo leh iOS 9
2 Sida loo kordhiyo cabbirka xarfaha xitaa inbadan
Waxaan fureynaa setinka waana fureynaa Shaashadda iyo iftiinka.
Waan ciyaarnay Tamaño del texto.
Dhibicda ayaynu simbiriirixanaynaa dhanka midig. Qoraalka wuxuu la mid noqon doonaa sida qoraalka aan kor ku aragno.
Haddii aad dhibaatooyin xagga aragtida ah qabtid oo wixii kor ku xusan aadan haysan wax kugu filan, weli waa la sii ballaarin karaa warqadda, laakiin tan waa inaad aadaa goobaha marin-u-helka, taas oo ah halka ay dejintu inta badan diiradda saareyso dadka leh aragga iyo dhibaatooyinka maqalka. Haddii ay tahay kiiskaaga ama qof aad taqaanno, waxaan sameyn doonnaa waxyaabaha soo socda:
Sida loo kordhiyo cabbirka xarfaha xitaa inbadan
Waxaan fureynaa dejinta waana fureynaa General.
Waxaan u soconaa Gaaritaan.
Waan soo galnay Cabir ka weyn.
Waxaan dhaqaajineynaa wareejin. Waxaan arki doonaa in xaraf weyn ka muuqdo midigta.
Dhibicda ayaynu simbiriirixanaynaa ilaa aad ka gaarto cabirka farta la rabo.
Si aan runta u sheego, sifiican uma fahmi karo sababta ay u kala saareen xulashooyinkaan. Waan fahansanahay in qofkasta oo dhibaato araga leh oo og iOS inuu toos u aadi doono marin u helida, laakiin ma dhaawaceyso hadii, si la mid ah labada ikhtiyaar ay ku jiraan Helitaanka, labada ikhtiyaar sidoo kale waxay kujireen goobaha ugu muhiimsan. Laakiin haye, markaan ogaano waxaan ku badali karnaa ereyada sida aan doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo beddelo cabbirka farta ku qoran iPhone-kayga oo leh iOS 9